Guggulsterone အမှုန့် (95975-55-6) hplc≥98% | AASraw R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Guggulsterone အမှုန့်
SKU: 95975-55-6. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Guggulsterone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (95975-55-6) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ကုန်ကြမ်း Guggulsterone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Guggulsterone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 170-171.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အရောင်: Light ကအဝါရောင်အမှုန့်
အသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ကြမ်း Guggulsterone အမှုန့်
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-ဗဓေလသစ်က de Guggul, Guggal, Guggul ဂွမ် resins, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone အမှုန့်, etc
Guggulsterone အမှုန့်ဟာ guggul စက်ရုံ, Commiphora mukul ၏ဗဓေလသစ်မှာတွေ့ရှိတဲ့ phytosteroid ဖြစ်ပါတယ်။ Guggulsterone အမှုန့်နှစ်ခု stereoisomers ၏လည်းကောင်း, E-Guggulsterone အမှုန့်နှင့် Z-Guggulsterone အမှုန့်အဖြစ်တည်ရှိနေလို့ရပါတယ်။ လူသားမြားသညျမှာ, တစ်ချိန်ကအသည်းထဲမှာလျော့နည်းသွားလက်စထရောပေါင်းစပ်မှုဟုယုံကြည်ခဲ့သော farnesoid X ကိုအဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးရန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများစုစုပေါင်းလက်စထရောမခြုံငုံလျှော့ချရေး Guggulsterone အမှုန့်အမျိုးမျိုးဆေးညွှန်းကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပေါ်ညွှန်ပြကြောင်းထုတ်ဝေခဲ့ကြခြင်း, နိမ့်သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်း ( "မကောင်းတဲ့လက်စထရောလ်") ၏အဆင့်ဆင့်များစွာသောလူအတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Guggulsterone အမှုန့်အများအပြားအာဟာရဖြည့်စွက်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, နှင့်ပါကစ္စတန်မှာတွေ့ရတဲ့ guggul သစ်ပင်, Commiphora mukul ထံမှ (guggul အဖြစ်လူသိများ) Oleogum စေး, နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာထောင်ပေါင်းများစွာကျော် Hyper-cholesterolemia, သွေးကြော, ဒူလာနှင့်အဝလွန်ခြင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများကုသရန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ guggul ကနေခွဲထုတ် Guggulsterone အမှုန့် guggul ရဲ့ကုထုံးသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိ bioactive မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1966 အတွက်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် guggul ၏ကုထုံးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုကတည်းကမြောက်မြားစွာ preclinical နှင့်လက်တွေ့လမ်းကြောင်းထွက်သယ်ဆောင်ပြီ။ ကုထုံးဖို့တုန့်ပြန်အချို့သောရှေ့နောက်မညီအတွက်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းအတိုင်းအတာများအရည်အသွေး, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နမူနာအရွယ်အစားနှင့်ဘာသာရပ်လူဦးရေရလဒ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပေမယ့်, စသည်တို့, preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက်ထံမှတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ data တွေကိုအကြီးအကျယ်တှငျဖျောပွထား guggul များအတွက်ကုထုံးတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ ရှေးခေတ် Ayurvedic စာသားကို။ သို့သော်အများကြီးပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားနှင့်ရေရှည်အတူအနာဂတ်လက်တွေ့လေ့လာမှုများကဤတောင်းဆိုမှုများကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ယင်းကုထုံးများ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့် guggul သို့မဟုတ် Guggulsterone အမှုန့်, အထူးသယင်း၏ hypolipidemic, ဓါတ်တိုးခြင်း, antiinflammatory လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဆက်စပ်မျိုးစုံ pharmacological လှုပ်ရှားမှုများမှဆင်းသက်လာကြသည်။ ဒါဟာ Guggulsterone အမှုန့် farnesoid x ကိုအဲဒီ receptor (FXR) မှာတစ်ဦးရန်, အလက်စထရောများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်သည်းခြေအက်ဆစ် homeostasis များအတွက် key ကိုမှတ်တမ်းထိန်းညှိကြောင်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Guggulsterone အမှုန့်အားဖြင့် FXR ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသည်၎င်း၏ hypolipidemic အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ယန္တရားအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု Guggulsterone အမှုန့်ဟာသည်းခြေဆားတင်ပို့မှုစုပ်စက် (BSEP), အသည်းကနေလက်စထရော metabolites, သည်းခြေအက်ဆစ်ဖယ်ရှားရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်တစ်ခု efflux Transporter upregulates ကြောင်းပြသသည်။ Guggulsterone အမှုန့်အားဖြင့် BSEP စကားရပ်၏ထိုကဲ့သို့သော upregulation သည်းခြေအက်ဆစ်သို့လက်စထရောလ်ဇီဝြဖစ်နှာနှင့်အရှင်က၎င်း၏ hypolipidemic လှုပ်ရှားမှုအတွက်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေယန္တရားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ Guggulsterone အမှုန့်အစွမ်းထက်နျူကလီးယားအချက်-kappaB (အဲန်အက်ဖ်-kappaB), ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှု၏အရေးပါသောထိန်းညှိ၏ activation တားစီးတွေ့ရှိထားသည်။ Guggulsterone အမှုန့်အားဖြင့်အဲန်အက်ဖ်-kappaB activation ၏ထိုသို့သောဖိနှိပ်မှု Guggulsterone အမှုန့်များ၏ antiinflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုယန္တရားအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတ adrenergic ဟော်မုန်း၏အတူသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုကိုမီးရှို့ကောင်ဆီဥကို (ဥပမာ adrenaline) ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုအလွန်အံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုပေါင်းစပ်နိုင်လျှင်ငါ့ထံသို့အသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါ့အပြင်စိတ်ဝင်စားဖို့ ECA type ကိုထပ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသွေးထဲမှာလည်ပတ်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏကိုလျော့ချဖို့လေ့သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ Guggulsterone မှုန်အရှင်အများဆုံးအဆင့်မှာ operating အားလုံးဇီဝကမ္မအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုစနစ်များကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, ဒီလျော့ချရေးဟန့်တားတဲ့အကြီးအအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ။
Guggulsterone မှုန်အဆီကိုမီးမရှို့ဖို့ရန်ပွဲအတွက်အကြိုးပွုနိုငျကွောငျးနောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေ ketogenic အစားအစာနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ketogenic အစားအစာပိုမိုအစွမ်းထက် T4 မှ T3 ၏ပြောင်းလဲခြင်းလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်သိုင်းရွိုက်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ Guggulsterone မှုန်3လအတွင်းနေ့စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဘယ်မှာဒါ့အပြင်သူတို့ဟာလူနာအများစုအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်တိုးတက်သောလျှော့ချရေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ tetracycline နှင့်တကွ, ရောင်ရမ်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရေး 65.2 အဆိုပါ Guggulsterone မှုန် 68% အထိနှိုင်းယှဉ်ပါက% ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေတစ် Guggul ဝက်ခြံတိုက်ခိုက်နေမှာအလွန်အစွမ်းထက်သည်။
အဘယ်သူသည်ဒီကနေအကျိုးရရှိနိုင်သလဲ Hmmm !!! ကောင်းပြီ, အဖြစ်ဝေးကျနော်ပြောပြနိုင်အဖြစ်နီးပါးလူတိုင်းအတွက်။ ပိုကောင်းတဲ့အသားအရေကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါသိတစ်ခုတည်းလူတစ်မရှိပါ။ ဤအဝက်ခြံများအတွက်အသားအရေရဲ့အဆီပြန်နှင့်အလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့လေ့အဖြစ်ဒါကဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်အပေါ်သူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ ငါ့ကိုမှန်းကြစို့ - ဘယ်သူမှမစ္စတာ Huggulee Guggulee မှာရယ်မောနေပါသည်! အမှန်မှာသူတစ်ဦးရယ်စရာနာမကိုအမှီရှိစေခြင်းငှါသော်လည်းငါ့စာအုပ်ထဲတွင်သူတစ်ဦးသူရဲကောင်းပါပဲ။ အဘယ်မှာရှိအခြားသင်အဆီမဆုံးရှုံးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးဝင်းကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့လက်စထရောပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်စေခြင်း, တစ်ချိန်တည်းမှာသင့်ရဲ့အသားအရေတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်သလဲ ငါရှည်လျားခက်ခဲကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပင်တဦးတည်းပြိုင်ဘက်ကိုရှာဖွေရှိသေးပါတယ်။
အိုဟုတ်တယ်! ငါမေ့လျော့ခြင်းမပြုမီ, တဦးတည်းယူသင့်သောက်သုံးသောအစားအစာများနှင့်အတူတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် 30-60mg ဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းသဘာဝကျကျ Guggul ထုတ်ယူမြင့်အာနိသင်ပါရှိသည်သောထုတ်ကုန်ကိုရှာသော်လည်းသတိရ! အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးအကွံဉာဏျပြီးတော့ထွက်သွားပါနှင့်ဤကောင်လေးရှာတွေ့သည်, မိမိလက်ကိုလှုပ်, ပြီးတော့သူဖြစ်စေသောအကြိုးခံစားခှငျ့မြား၏အိမ်ရှင်အသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ guggul စက်ရုံထဲကနေထုတ်ယူတစ်ဦးကအဝါရောင်ဗဓေလသစ် Guggulsterone မှုန်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအခြားသူများကိုခေါ်တ္ထုများပါရှိသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများ Guggulsterone မှုန်အသည်းအားဖြင့်လက်စထရောများဇီဝြဖစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုတွေ့ပြီ။ Guggulsterone မှုန်လည်းသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါနှင့်လေ့ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ guggul ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏သူတို့၏အန္တရာယ်၏သတိနဲ့ယူရပါမည်။
နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့, guggul ဗဓေလသစ်ဒူလာ, အဆစ်, အာရုံကြောရောဂါများ, လိပ်ခေါင်း, ဆီးပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အရေပြားရောဂါများကုသရန်တိုင်းရင်းဆေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ Guggulsterone မှုန်ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးလက်စထရောလ်အဖြစ် lipid ဇီဝြဖစ်ပုံမမှန်ဆုံး, အသည်းထဲမှာပြုမူနိုင်သောသက်သေအထောက်အထားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အမည်မသိယန္တရားမှတဆင့် Guggulsterone မှုန်လည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်စွမ်းအင်အသုံးချမှုတိုးပွားလာ, ဟော်မုန်း၏သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်။
ဆေးဝါးများနှင့်အတူ interaction က
Guggul ထုတ်ယူ warfarin, Aspirin, nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်သွေးခဲစနစ်တားစီးကြောင်းကိုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားမရသင့်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေနဲ့အတူခေါ်သွားတဲ့အခါမှာ Guggul ထုတ်ယူပြင်းထန်သို့မဟုတ်ထိန်းအကွပ်မဲ့သွေးထွက်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ Guggul ထုတ်ယူဒြပ်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်သိုင်းရွိုက်ရောဂါကုသရန်အသုံးပြုသည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အတူတူယူ guggul နှင့်သိုင်းရွိုက်ဆေးဝါးများသိုင်းရွိုက်မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကို, သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းသည်အလွန်ကြီးမားပမာဏထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အလားအလာအသက်အန္တရာယ်ခွအေနအေမြှင့်နိုင်ပါ။ Guggul ထုတ်ယူအလွန်မူးယစ်ဆေးဝါးများ propranolol သို့မဟုတ် diltiazem ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။
hypo- နှင့် hyperthyroidism နှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်သိုင်းရွိုက်ရောဂါ, ကုသခံနေရသူများသည် guggul ထုတ်ယူယူမီ၎င်းတို့၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့်အတူလူသာမန်အားဖြင့် guggul ထုတ်ယူ metabolize မည်မဟုတ်ပါကြောင့်မယူသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် guggul ထုတ်ယူသင်တို့အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Little ကသိပ္ပံနည်းကျသတင်းအချက်အလက် guggul ထုတ်ယူ၏အလားအလာအပေါ်အဆိပ်တည်ရှိ။ ဒါဟာ guggul ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများနှင့် lipid ဇီဝြဖစ်ပေါ်သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ကောင်းရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ Guggul ထုတ်ယူခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းနှောင့်အယှက်များနှင့်အဖုများကိုဖြစ်ပေါ်စေ။ guggul ထုတ်ယူဖို့မတည့်တုံ့ပြန်မှုအစီရင်ခံထားပါပြီ။
Guggulsterone အမှုန့် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း receptors ၏ကျယ်ပြန့်-spectrum ကို ligand ဖြစ်ပြီး, အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုအပိုင်လူသိများသည်:
Mineralocorticoid အဲဒီ receptor ရန် (Ki = 39 nm)
အဓိကချို့ယွင်းအဲဒီ receptor တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist (Ki = 201 nm)
Glucocorticoid အဲဒီ receptor ရန် (Ki = 224 nm)
အန်ဒရိုဂျင် receptor ရန် (Ki = 240 nm)
estrogen receptor agonist (Ki>5μM; EC50>5μM)
Farnesoid X ကိုအဲဒီ receptor ရန် (IC50 = 5-50 μM)
Pregnane X ကိုအဲဒီ receptor agonist (EC50 = 2.4 μM ((Z) -isomer))
Guggulsterone အမှုန့်နှုတ်တက်ကြွဖြစ်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနမှာတွေ့ရှိထားပြီး; ကကောင်းတစ် pharmacokinetic ပရိုဖိုင်းကိုညွှန်ပြ, ဒီမျိုးစိတ်အတွက် 42.9 နာရီဝန်းကျင်တစ်ဝက်ဘဝကိုအတူကြွက်များတွင်ခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 10% ၏ပကတိ bioavailability ရှိပါတယ်။
Guggulsterone ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Guggulsterone အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Guggulsterone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Guggulsterone ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကာယဗလများအတွက် Guggulsterones (guggul)
Proviron (Mesterolone) အမှုန့်
Trenavar အမှုန့် (4642-95-9)